QIT600F2 Kunyora inopindirana piritsi
Iyo QIT600 F2 ndeye QOMO yazvino uye yakakura yakakura skrini inopindirana yekutarisa.Shandisa iyi nyowani uye yakagadziridzwa desktop inopindirana podium kudzora hurukuro yako kana mharidzo pasina kufuratira vateereri vako.Padesktop yako, itablet ine simba ine hombe, inopenya, uye inopindura zvinoshamisa.
Ongorora: Isu tinotsigira mhando yeQomo yedemo ichiri mukugadzirwa kwakawanda inogona kugamuchira OEM / ODM
Rakawanda simba muchinyoreso chako
Gadzira zvirevo pachinhu chero chipi zvacho nerunyoro-runokurumidza uye rwakatsetseka rwakateedzerwa runyoro.Tora manotsi, dhizaini, uye gadzira sezvaungaita mubhuku rako raunofarira.
Unogona kunyora nechinyoreso nemhando dzakasiyana dzemitsara wodzvanya peni kuti ive yekudzima kuti udzime pfungwa yekukanganisa.
Qomo yekugadzira peni inoratidzira ichakubatsira iwe kunakidzwa nechiitiko chekushanda zvakananga pachiratidziro nedhizaini yedu inonzwisa peni.
Yakagadzirwa kuti ive nyore uye yakasununguka
Gadzirisa iyo QIT600 F2 chero kupi zvako pakati pe12° ne130°—chero zvazvinonzwa zvakanaka.Uye haufanirwe kunetseka nezve kupindira kana iwe uchizorora maoko ako pachiratidziro uchinyora kana kudhirowa.
Ramba wakabatana nevateereri vako
Batanidza PC uchishandisa HDMI yekupinda, uye inobuda pane purojekita kana hombe skrini.Iwe unogona kudzora zvese zvinoonekwa nevateereri vako kubva pachigadzirwa chimwe chete, usingatarise kumashure kwako kana kuhwanda kuseri kwekombuta.
Yakazara-laminated 21.5 inch(Sikirini inoshanda saizi: 478.64(H) X 270.11(V)) IPS Peni Ratidza:
Iine ichangoburwa yakazara-laminated tekinoroji uye yakashongedzerwa ne-anti-glare girazi pani, zvinonyatso dzikisa kupenya kwekunzwa uye kunenge kusina kubviswa, chengetedza maziso ako kana uchinakidzwa nekudhirowa.
178° yakafara yekuona kona uye 16.7M yeruvara kuratidza inokubatsira kunyatso penda zvese zvebasa rako.
1920 * 1080 resolution yakajeka kuoneka uye hierarchy chaiyo uye yakajeka ruvara inokupa iwe chaiyo inooneka nyika.
Simba uye kugarisana
Ose mahwindo uye android system inoenderana
kuenderana nePS, AI, AE Etc. yekudhirowa software zvakakwana
Digital pen kunyora piritsi packing details
Yakajairika kurongedza nzira: 2 pcs / katoni
Gross uremu: 15.6 kgs
Kutakura saizi: 600 * 345 * 510mm
Zvinotevera: QWB300-Z interactive whiteboard
Zvakapfuura: Qomo Interactive Flat Panel ine 4K yakakwirira resolution
QIT600F2 data data
QIT600F2 Kunyora piritsi nekukurumidza ruzivo
QOMO QIT600F2 Mushandisi Manual_1.1
QIT600 F2 Kunyora Tablet Bhurocha